DF Somaliya iyo Midowga Yurub oo kawada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin Deyn Cafinta & Amniga | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Somaliya iyo Midowga Yurub oo kawada hadlay arrimo badan oo ay...
DF Somaliya iyo Midowga Yurub oo kawada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin Deyn Cafinta & Amniga
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Midawga Yurub ayaa Muqdisho ku yeeshay kulan looga hadlay horumarinta Dhaqaalaha, Deyn cafinta sida dib-u-habeynta ciidamadu ay uga qayb qaadatay horimarinta amniga iyo nabad-gelyada iyo xoreynta iyo xasilinta deegaannada argagaxisadu ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha JF Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiyay kulanka oo qay ka qayb galeen wasiirrada xukuumadda qaar kamid ah safiirrada midawga Yurub ee Muqdisho ku sugan oo uu hoggaaminayay safiirka midawga Yurub ee Soomaaliya, Nicolas Berlanga.
Kulanka oo ka dhacay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa qayb ka ahaa shirarka joogtada ah ee looga hadlo horumarinta wadashaqeynta ka dhexeysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Midawga Yurub.
DF Somaliya iyo Midowga Yurub oo kawada hadlay xasilinta dalka
dib u habeynta amniga
Cismaan Cawad March 11, 2020 At 19:19
Waxaan anigu aad u aaminsanahay in dalka Soomaaliya iyo guud ahaan Mandiqadda Soomaaliyeed uu aayahooda dhaqaale iyo amni ba ku jiro inaga oo Turkiya iyo Midowga Yurubta toos ugu iskugu xidhna marka aan dhacdooyinka dunida iyo arrimaha ahamiyadda ugu sarreysa leh wax ku cabbiray.
Waddama Midowga Yurubta iyo guud ahaan isku baheystay haykalka EEA (European Economic Area) loo yaqaanno ayaa mustaqbalka caalamka u ah oo u sii ahaan doona rugta dhaqaalaha, waxsoosaarka, ilaalinta xuquuqda aadanaha, badbaadinta cimilladda iyo amniga waddamada soo koraya. Kuwan baa caddaalad iyo dowlad wanaag ugu dhaw marka dunida kale lagu jimeeyo maadaama Britain iyo Mareykan uu gabbalkoodii dhacay.
Waxaan kale oo aad u aaminsanahay in hannaanka federaaliga ee Soomaaliya lagu saleysiiyo kan waddamada EU/EEA ka hirgalay ee ay sida ku-dayashada mudan ugu caano maaleen. Waa haddii aynu fiiradheeridaas leenahay.
Cismaan Cawad March 12, 2020 At 14:23
Sida ay aniga ila tahay in kasta oo uu dalkeenu wali qabyo yahay haddana waxay xaqiiqadu tahay in uu yahay waddan caalamka qiima sare ugu fadhiya ee loollan xooggan loogu jiro. Sababta aasaasiga ahi waxaa weeye in uu yahay dal ku yaalla mandiqad aad u straatijisan marka Marinka Hormuz oo iminka laga hayaamayo laga reebo. Nasiib wanaaggu waxuu yahay in ay mandiqaddani Soomaaliyi calfatay laakiin se ayaan darradeedu tahay in aanay wali qaayaheeda dhaadanayn.
Waxaa aniga ii muuqata in ay Soomaaliya u ballaqan tahay fursad dahabi ah ee qiimaheeda straatijiga ah salka ku haysa, taas oo ay haddii ay madaxdeedu shaxdeeda si fariidnimo lagu dheehay u dheelaan waddanku uu waxsoosaar iyo dhaqaale ahaan ba muddo gaaban gudaheeda samada isku shareeri lahaa. Guusha ugu horreysa waxay ka dhalin lahaayeen lacagta qaran oo ay toos ku saleeyaan qiimaha sarrifka Euro-da inta ay doollarka nacaska ah ka hayaamaan. Waxaa xigi lahayd iyaga oo Bangiga Dhexe ee Turkiga ku taakeeya Bangiga Dhexe ee Soomaaliya iyo hantida qaran.
Waxay taasu dhaqaalaha dalka u noqon lahayd seef laba-aflaa ee maalgashi baahsan oo shisheeye degdeg ugu soo jiidan lahaa maadaama Euro-da iyo Liiraha Turkigu ay lacagteena u yihiin hanti maaliyadeed oo culus oo ay ku taagsanayso. Suuqyada caalamku waxay heli lahaayeen kalsooni buuxda oo u fududeysa in ay dalkeena si xoog iyo hawli leh ugu maalgashadaan maadaama uu dammaanaqaad sugani u muuqdo. Waxaan aaminsanahay oo kale in uu Shilin Soomaaligu sarrifkiisu rug yeelan lahaa oo maciishad macaan laga dheefi lahaa qiime ahaan.
Haddii aan qaldanahay waa la i saxi karaa oo waa dood furan.